Andriamanitra: andriamanitra telo? | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Milaza ve ny foto-pinoana ny Trinite fa misy andriamanitra telo?
Misy ny diso milaza fa ny foto-kevitra momba ny Trinite Fotopampianarana [ny Trinite Fotopampianarana] dia mampianatra fa misy andriamanitra telo rehefa mampiasa ny teny hoe "olona". Izao no lazain'izy ireo manaraka ireto: Raha tena "olona" Andriamanitra, ny Ray, dia Andriamanitra ao amin'ny tenany Izy (satria manana ny toetran'Andriamanitra. Hoheverina ho "iray" Andriamanitra izy. Toy izany koa ny an'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hisy andriamanitra telo misaraka.
Hevi-diso izany momba ny fisainana Trinité. Eny tokoa, ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy tokony hiteny hoe samy Ray, Zanaka na Fanahy Masina samy mameno ny toetra feno an'Andriamanitra avokoa. Tsy azontsika atao ny mampifangaro ny tritheism amin'ny Trinite. Ny voalazan'ny Andriamanitra telo izay iray momba an'Andriamanitra dia Andriamanitra iray ihany, saingy ny telo amin'ny lafiny mampiavaka azy. Ny manam-pahaizana kristiana Emery Bancroft dia ao amin'ny bokiny Christian Theology ("Teolojia kristiana"), p. 87-88, toy izao:
" Ny ray fa tsy toy izany Andriamanitra; satria tsy Ray ihany, fa Zanaka sy Fanahy Masina. Ilay teny hoe ray dia manamarika io fanavahana manokana amin'ny toetran'Andriamanitra izany, izay ifandraisan'Andriamanitra amin'ny Zanaka ary amin'ny alalàn'ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amin'ny Fiangonana.
Ny zanaka fa tsy toy izany Andriamanitra; fa tsy zanaka fotsiny Andriamanitra, fa rainy sy fanahy masina koa. Ny zanakalahy dia manamarika io fanavahana io amin'ny maha-Andriamanitra azy izay ifandraisan'Andriamanitra amin'ny Ray ary nirahin'ny Ray hanavotra an'izao tontolo izao izy, ary ny Fanahy Masina no alainy amin'ny Ray.
Ny Fanahy Masina fa tsy toy izany Andriamanitra; fa tsy ny Fanahy Masina Andriamanitra, fa ny ray sy ny zanany koa. Ny Fanahy Masina dia manamarika izany fanavahana izany amin'ny maha-Andriamanitra azy izay ifandraisan'Andriamanitra amin'ny Ray sy ny Zanaka, ary nirahin'izy ireo hanatanteraka ny asan'ny fanavaozana ny ratsy fanahy sy hanamasinany ny Fiangonana. ”
Rehefa manandrana mahazo ny foto-pinoana ny Andriamanitra telo izay iray dia mila mitandrina tsara ny fomba fampiasantsika sy ny fahazoana ny teny hoe "Andriamanitra". Ohatra, na inona na inona holazain'ny Testamenta Vaovao momba ny firaisan'Andriamnitra dia misy fahasamihafana eo amin'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra Ray ihany koa. Amin'izao fotoana izao, ny formula eto Bancroft etsy ambony dia mahasoa. Mba hamaritana tsara, dia tokony hiresaka momba ny "Andriamanitra Ray" isika, "Andriamanitra Zan" ary "Andriamanitra Fanahy Masina" rehefa manondro hypostasis na "olona" ao amin'ny Andriamanitra isika.
Tena ara-drariny ny miresaka momba ny "fetra", ny mampiasa analogies na ny manandrana manazava ny toetran'Andriamanitra amin'ny fomba hafa. Io olana io dia azon'ny manam-pahaizana kristiana tsara. Ao amin'ny lahatsorany The Point of the Trinitarian Theology ("The point of the Trinitarian Theology", 1988, Toronto Journal of Theology), hoy i Roger Haight, mpampianatra ao amin'ny Toronto School of Theology, momba an'io fetrany io. Nanaiky tamim-pahatsorana ny sasany amin'ireo olana ao amin'ny teolojia Trinite izy, fa manazava ihany koa izy hoe ahoana ny Andriamanitra telo izay manome fanazavana mahery ny maha-Andriamanitra azy - raha mbola voafetra koa ny olombelona dia afaka mahatakatra an'io toetra io.
Millard Erickson, teolojia sady hajaina teolojika koa dia manaiky io ferana io. Ao amin'ny bokiny Andriamanitra in the Three Persons ("Andriamanitra amin'ny olona telo") ao amin'ny pejy faha-258 dia manondro ny fanekena ny "tsy fahalalana" nataon'ny manam-pahaizana hafa sy ny azy ihany:
"[Stefana] Davis dia nandinika ireo fanazavana momba ny ankehitriny [momba ny Andriamanitra telo izay iray] ary nahita fa tsy mahavita ny zavatra heverina ho tratrariny izy, dia nanao ny marina izy rehefa nahatsapa fa nahatsapa fa nifampiraharaha tamina tsiambaratelo. , Izy angamba angamba no nanao ny marina azy kokoa noho ny ankamaroantsika izay, rehefa noterena mafy, dia tokony hanaiky fa tsy fantatsika hoe iray Andriamanitra ary tsy mitovy ny telo amin'izy. "
Azontsika tsara ve ny fomba maha Andriamanitra iray sy telo miaraka? Mazava ho azy fa tsia. Tsy manana fahalalana azo tsapain-tanana momba an'Andriamanitra isika. Tsy vitan'ny hoe voafetra ihany ny zavatra niainantsika, fa ny fitenintsika koa. Ny fampiasana ny teny hoe "olona" fa tsy hypostasis avy amin'Andriamanitra dia fifanekena. Ilaintsika ny teny iray manindry ny maha-Andriamanitra antsika manokana ary misy ny foto-kevitry ny tsy fitoviana. Mampalahelo fa ny teny hoe "olona" dia tafiditra ao koa ny hevitra hoe misaraka rehefa ampiharina amin'ny olona olombelona. Ny mpanaraka ny Trinite dia mahatakatra fa Andriamanitra dia tsy karazan'olona misy azy. Fa iza moa ilay olona manana toetra "araka an'Andriamanitra"? Tsy manana valiny isika. Izahay dia mampiasa ny teny hoe "olona" isaky ny hypostasis'n Andriamanitra satria teny manokana izany ary ambonin'izany rehetra izany satria Andriamanitra dia toetrany manokana amin'ny fifandraisany amintsika.
Raha misy mandà ny teolojia ny Andriamanitra telo izay iray, dia tsy manana fanazavany izy fa mitahiry ny firaisan'Andriamanitra - izany dia fepetra ara-baiboly tanteraka. Izany no antony nandrafian'ny Kristiana an'io fampianarana io. Nanaiky ny fahamarinana izy ireo fa iray ihany Andriamanitra. Fa tadiaviny ihany koa ny nanazava fa i Jesoa Kristy dia voaresaka ao anaty Soratra Masina ihany koa mahakasika ny maha-Andriamanitra. Toy ny mihatra amin'ny Fanahy Masina ihany koa. Ny foto-pinoana ny Trinite dia novolavolaina nanazava, satria avelan'ny teny sy ny eritreritra, ny fomba maha Andriamanitra iray sy telo miaraka.
Ny fanazavana hafa momba ny toetran'Andriamanitra dia natao tao anatin'ny taonjato maro. Ny Arianism dia iray. Ity teoria ity dia milaza fa noforonina ny zanaka mba ho voatahiry ny firaisan'Andriamanitra. Mampalahelo fa ny famaranana an'i Arius dia faran'izay diso satria tsy afaka noforonina ny zanakalahy ary mbola Andriamanitra ihany. Ny teôlôjika rehetra natolotra mba hanazavana ny toetran'Andriamanitra momba ny fanambaran'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina dia noporofoina tsy vitan'ny hoe ratsy ihany fa nisy fiovana be loatra. Izany no antony mahatonga ny fampianaran'ny Trinite ho fanazavana ny toetran'Andriamanitra, izay mitazona ny fahamarinan'ny fijoroan'ny Baiboly, dia efa naharitra nandritra ny taonjato maro.